On1.click | တာဟူး ဆူမဲ့ဒန်း
... ိုင်ငံ၊ အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ်ရှိ ဆူမဲ့ဒန်းမြို့မှ ဆွန်ဒန် တို့ဟူးအကြတ်...
ဆူမဲ့ဒန်း ရီဂျင်စီ၊ အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ်
Cookbook: Tahu sumedang Media: Tahu sumedang
တာဟူး ဆူမဲ့ဒန်း သို့မဟုတ် တာဟူး ဘွန်ကန်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ်ရှိ ဆူမဲ့ဒန်းမြို့မှ ဆွန်ဒန် တို့ဟူးအကြတ်ကြော်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို တရုတ်အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုး Ong Kino မှ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားသော တို့ဟူးများနှင့် ကွဲပြားသည့် ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
တာဟူး ဘွန်ကန်သည် ဆူမဲ့ဒန်းမြို့ရှိ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးတို့ဟူးဆိုင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် "ဘွန်ကန်"တို့ဟူးကို တရုတ်ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ Ong Kino မှ ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆူမဲ့ဒန်းမြို့၏ ပထမဆုံးသော တို့ဟူးဖြစ်သည်။ Ong Kino သည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဖူကျန့်ပြည်နယ်၊ ကွမ်ကျိုးမြို့၊ အန်းရှီးမှ ဖြစ်ပြီး ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကာလတွင် အင်ဒိုနီးရှားသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Ong Kino သည် သူ၏မိသားစုစားရန် တို့ဟူးအား စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူ၏ အိမ်နီးချင်းများအား စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး လူအများမှ ကြိုက်နှစ်သက်ကြသောကြောင့် လုပ်ငန်းအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် Ong Kino ၏ တဦးတည်းသော သားဖြစ်သော Ong Bunkeng သည် ဆူမဲ့ဒန်းသို့ရောက်ရှိလာပြီး မိဘများ၏လုပ်ငန်းကို ဆက်ခံခဲ့ပြီး Ong Kino နှင့် သူ့ဇနီးတို့သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဇာတိမြို့သို့ ပြန်ခဲ့ကြသည်။ တရုတ်သို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက် သူ့၏လုပ်ငန်းအား သူသားဖြစ်သူ Ong Boen Keng (တရုတ်:王文卿) အား အမွေပေးခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မတိုင်မီထိ လုပ်ငန်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် လုပ်ငန်းသည် အအောင်မြင်ဆုံးအခြေအနေသို့ရောက်ပြီး ယနေ့အချိန်တိုင်အောင် အလွန်အောင်မြင်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဆူမဲ့ဒန်း၏ မင်းသား ဆူရီးယန်းမာဂျာသည် ဆီတူရာဂျာခရိုင်ခွဲသို့ ခရီးထွက်သောအခါတွင် "တာဟူး ဘွန်ကန်"ဆိုင်ရှေ့သို့ ရပ်တန့်ပြီး တို့ဟူးကို စားသူကြည့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည် ဆွန်ဒန်ဘာသာစကားဖြင့် "Geuning ngeunah ieu kadaharan teh, moal burung payu geura" (အကြမ်းဖျဉ်းဘာသာပြန်လျှင် "ဤတို့ဟူးသည် အရသာအလွန်ရှိပြီး လူများက ဝယ်စားမှာ အသေအချာပဲ") ဟု ဆိုခဲ့သည်။
တာဟူး ဆူမဲ့ဒန်း၏ လက္ခဏများတွင် ၎င်းတို့ ပါဝင်မှုသည် တဝက်လွတ် သို့မဟုတ် အပြည့်လွတ် ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်တို့ဟူးဖြူထက် အထဲတွင် အနှစ်ပိုမိုပါဝင်သည်။ အရသာသည် အနံ့ပြင်းသည်။ လွန်တောင်း၊ ဆမ်ဘယ်အမျိုးမျိုး၊ ပဲငံပြာရည် သို့မဟုတ် ဂျာပဲ ရာဝတ်တို့ဖြင့် သုံးဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။   Kompas သတင်းစာမှ အဲကို ဟန်ဒြာဝန် ဆိုဖ်ယန်သည် တာဟူးဆူမဲ့ဒန်းသည် 2.5–3 cm x3cm အရွယ်အစားရှိပြီး အညိုဖျော့ရောင်ရှိကာ ပြောက်ကျားအရေများနှင့် ကြွပ်ဆက်ပြီး အရသာရှိသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
↑ Ganie၊ Suryatini N.။ "From Doufu to tahu"၊7May 2006။ 21 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3May 2013။
↑ Sofyan၊ Eko Hendrawan (7 January 2012)။ Tahu Sumedang, Lezat berkat Air Tampomas။ Kompas။
Gunawan၊ Iwan; Khairunnisa၊ Anita (2010)။ Yuniawati၊ Reny; Koswara၊ Rani Andriani (eds.)။ Sentra Bisnis Jawa Barat: Panduan Wisata Belanja & Kuliner Khas Jawa Barat။ Jakarta: TransMedia။ ISBN 978-979-799-150-0။
Oey၊ Eric (1997)။ Java။ Hong Kong: Periplus Editions။ ISBN 978-962-593-244-6။
Saragih၊ Yan Pieter; Sarwono၊ B. (2001)။ Membuat Aneka Tahu။ Depok: Penebar Swadaya။ ISBN 978-979-489-610-5။
Setyautama၊ Sam (2008)။ Mihardja၊ Suma (ed.)။ Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia။ Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia။ ISBN 978-979-9101-25-9။